4KW FM Isku-dheellitiran Iibka | FMUSER
87-108 MHz 4kW FM Combiner for sale 4000W Isku darka Gudbinta - Model A
Ku saabsan 4KW FM CIB Combiner
"Waxaa laga yaabaa inaad ka heshid wax wanaagsan oo ka socda FMUSER. Waxay daboolayaan dhammaan noocyada kala duwan ee awoodda Isku-duwaha Gudbinta, Isku-duwaha FM ee ugu fiican ee iibka ah, awoodda u dhexeysa 4kw ilaa 15kw, 40kw ilaa 120kw"
FMUSER 3/4 Channels 4KW FM Isku-Duwaha Dheelitiran Si Wanaagsan Ugu Shaqeeya:
Codsiga ee Awood sare oo 4kW ah 88-108Mhz FM isku dhafka waxay dabooli kartaa baahida sii kordheysa ee baahinta, xallinta dhibaatada meel bannaan oo ku taal munaaradda anteenada. Dhammaanteen waan ognahay in isku-duwaha dheelitirka FM-ka ee xarunta raadiyaha sidoo kale loo yaqaan ' Combiner Constant Impedance Combiner (CIB), oo la mid ah Nidaamka Isku-dhafka FM tignoolajiyada ayaa ah xalka ugu fiican ee baahinta qiimaha jaban ee baahinta raadiyaha.
The FMUSER 4kW gudbiye iib ah, kaas oo quseeya tignoolajiyada horumarsan ee RF iyo tignoolajiyada CAD ee ugu dambaysay, kaas oo leh 3/4 dalool (channels) dekedaha wax gelinta guud ahaan, taas oo la macno ah in ay ka gudbi karto calaamadaha dhawr lamaane oo FM-ka adag ee FM-ka ah ee u dhigma. Waxaa si aan kala go' lahayn u naqshadeeyay oo u horumariyay sannado badan farsamoyaqaannadayada RF ee khibradda leh, taas oo macnaheedu yahay tan Isku duwaha FM awood sare oo iib ah la yimaada tayo la isku halayn karo iyo qiimo jaban.
Haddi aad tahay rookie ama khabiir ku ah tignoolajiyada baahinta RF, waxa loo baahan yahay in la ogaado in 4 kanaal isku darka gudbiye waa qayb muhiim ah waxayna samaysaa isku xidhka isku xidhka ka horeeyay iyo kuwan soo socda ee nidaamka gudbinta TV-ga. Shaqadiisu waa in ay ku xidho wax soo saarka gudbiyaha kanaalada kala duwan hal kanaal si loogu isticmaalo hal anteeno dhowr Qalabka baahinta FM-ka ee xarunta raadiyaha.
FMUSER waxay daboolaysaa noocyo kala duwan isku darka gudbiye iib ah, sida isku-darka dheellitiran ee FM-ka, isku-dariyaha nooca xiddigaha (isku-darka laanta), isku-darka isku-dhafka ah, iwm., wuxuu awood u leeyahay inuu buuxiyo shuruudo kala duwan. Alaabtani waxay gaadhaysaa hawlgab ku habboon, waxay la kulmeysaa heerar awoodeed oo kala duwan iyo moodooyin kala duwan oo isku dhafan. Xalka gudbinta soo noqnoqda ee wireless-ka ee gaarka ah iyo qaabka guud ee nidaamka iska ilaali dib u isticmaalka shaandhada, ka soo iibso isku dhafka FM FMUSER waxay yarayn kartaa lumitaanka gudbinta nidaamka waxayna badbaadin kartaa kharashkaaga.
Talo-siinta Isticmaalka 4kW FM Combiner
Isku-darku waa aalad dadban, kaasoo sita awood ka badan gudbiyaha FM. Sidaa darteed, ka dib rakibidda iyo hagaajinta, looma baahna in mar kale la hagaajiyo. The 4 dalool FM isku dhafka waxaa loo baahan yahay marka ay lagama maarmaan tahay in la gudbiyo calaamadaha badan ee hal anteeno ah. Haddii aan la isku darin saxda ah, calaamadaha ayaa is dhexgali doona gudbiyaasha midba midka kale, iyaga oo soo saaraya alaabooyin isku dhafan.
Waxyaabo dhowr ah oo ay tahay in la ogaado marka la isticmaalayo isku xirka 4kW FM
Qaybta hore waa Talo-siinta Isticmaalka 4kW FM Combiner | Skip
Qalab noocee ah ayaa lagu magacaabi karaa qalab warbaahineed oo heer sare ah? Tani waa su'aal mudan in laga fikiro. Tusaale ahaan isu-duwaha. Boqolaal jawaab celin iib ah oo isku-darka RF-ga ah ee lagu iibiyay adduunka oo dhan, waxaan helnay waxyaabo xiiso leh: in ka badan kala bar macaamiisheena ayaa sheegay in aysan tixgelin qiimaha iyo muuqaalka markii ugu horeysay markii la sameeyay baaritaan. Taas beddelkeeda, waxa soo jiitay tafaasiil ay dadka caadiga ahi dheg jalaq u siin waayeen, tusaale ahaan, markii Hamilton oo Cape Town ka soo jeeda uu aad u danaynayo mid ka mid ah xalalkayaga baahinta idaacadaha dawladda hoose, waxaanu siinay dhawr nooc oo kala duwan. -qaab-dhismeedka 4kw gudbiyaha isku-darka ah oo leh saddex godad. Muuqaalka ugu weyn ee qaabkani waa qaab-dhismeedkiisa fudud iyo isku-dhafka ku-meel-gaadhka ah ee ku habboon. Dhab ahaantii, raadiyaha Hamilton waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan aagga, iyo isku-duwaha 4kw wuxuu weli u adeegaa Hamilton iyo dhagaystayaashiisa tan iyo 2011. Dabcan, tani waa mid ka mid ah jawaab celinta iibka ka dib ee ugu fiican ee isku-darka RF. Macaamiil badan oo kale ayaa qiimeeyay in isku-darkayaga uu leeyahay koror heerkul yar, naqshadaynta awoodda awoodda koronto ee xirfadleyda, isku-darka awoodda, iwm. Waxaan leenahay karti iyo kalsooni aan ku siinno adeeg baahinta oo wanaagsan
Waxaad u baahan tahay isku-xidhaha FM 4kW in ka badan weligii
Maxaad Ugu Baahan Tahay Isku-Duwaha Dheelitiran Ee FM-ta Awood Sarreeysa Xaruntaada Raadiyaha?
Qaadashada Kanaalada 4 Gudbiye isku dar Tusaale ahaan, aaladda RF-da ee isku dhafan ee noocan oo kale ah waxay ku gudbin kartaa calaamado gudbiye badan oo kala duwan Anteenada gudbiyaha FM, taas oo macnaheedu yahay iyadoo la isticmaalayo qalabkan baahinta, idaacadahaas warbaahintu waxay ku baahin karaan calaamado badan iyagoo isticmaalaya HAL-gudiyaha gudbiye isku mar halkii ay isticmaali lahaayeen TENS OF sets of FM .
U soo iibso 4 Gudubiyaha Daloosha ee Xarunta Raadiyaha? Waa kan meesha saxda ah!
Tusmada Korontada ee Muhiimka ah ee 4 Chan 4kW FM Combiner
A Isku-duwaha 4kW oo leh 4 kanaal laga bilaabo FMUSER waxa loo istcimaalaa in lagu daro RF laga helo ilo kala duwan. Isku darka FM-yada waxaa loo isticmaali karaa codsiyo badan oo kala duwan si loo gaaro natiijooyin kala duwan.
4kW FM CIB Combiner x 1PCS
Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Isku-Duwaha 4kW FM
Tusmada Korontada ee FMUSER 4kW FM CIB Combiner (Tixraac Kaliya)
Ku habboon is dhexgalka soo noqnoqda
Naqshadaynta awoodda korantada oo aan badnayn
Kor u kaca heerkulka yar, qaab dhismeedka fudud
Naqshadaynta, qaabdhismeedka badan, iyo isku darka awooda
1 MHz *
Gelin cidhiidhi ah
NB ilaa WB go'doomin
Wax gelinta ballaaran
WB ilaa NB go'doomin
440 300 1030 mm
510 300 1030 mm
~ 41 kiilo
~ 48 kiilo
Isku-darka kala dheeraynta soo noqnoqda ee ka yar 1 MHz waa la beddeli karaa.